Tuesday, 22 August 2017 05:29
Somalidu waxay ku maahmaahdaa gaàl dil gartiisanasii wasiirkii hore ee madaxtooyada JSL Xirsi intii uu joogey qasriga madatooyada waxaa lagu yaqaaney inuu ahaa nin balanka ku wanaagsan beentana iska ilaasha haddii uu qof kula balamo qasriga sideeda u fuliya iskana ilaasha balan darada.
Inkasta oo uu ahaa nin lunsaday lacag aad u farabadan maantana lacagtii uu lunsaday uu ugu ololeynaayo xisbiga wadani laakiin hadana qofku wuxuu leeyahay waa inaan sheegnaa.
Hadaba maxaa is badaley intii uu wasiir maxamuud xaashi uu soo galey qasriga madaxtooyada maxaase lagu arki madaxtooyada dhaxdeeda dad badan oo reer somaliland waxay ogaàdeen amaba ay ka dheragsan yihiin in madaxtooyada uu ka dhigey maxamuud xaashi hoygii beenta JSL.
Madaxtooyada JSL wasiir maxamuud xaashi wuxuu ka dhigey meel been lagu soo galo beena lagagabaxo waana wasiirka beenta qaranka SL waana nin aad moodo in lagu yidhi beenta sheeg janada ayaad ku galeysaaye.
Madaxtooyadu waa muraayadiî qaranka JSL waa meeshii dhamaan shacabka reer SL ay iska eeganayeen laakiin maxamuud xaashi wuxuu ka dhigey theatre lagu matalo film mada beenta ee dalka SL.
Wasiir maxamuud xaashi wuxuu lamid noqday maah maahdii ahayd sadex la lama saaxiibo run ma yaqaane rabi ma yaqaane rag ma yaqaane markaa ninkaasi waxaan odhan lahaa waar ilaahay ka cabso oo runta sheeg waxaad jogttaa madaxtooyadii qaranka JSL.
More in this category: « Midka mid Ah Dadka Qaadku Wakhtiga kalumiyay laakiin hada isciil kaambiyay Qiso Na dhexmartay SULDAANKA GUUD EE BEELAHA BA HABAR MUUSE SULDAAN ABSHIR Oo Tacsi U Diray Qoyskii (AHUN) Marxuun Xaaji Ka Boode Oo Dalka Sucuudiga Ku Geeriyooday Dhawaan »